Vous êtes ici: Accueil → A la une → 2019 → août → 3 → Mbola Rajaonah-Claudine Razaimamonjy : Trois autres dossiers au Pôle Anti-Corruption
La coordonnatrice nationale des Pôles Anti-Corruption Ratiaraisoa Harimahefa et le ministre de la Justice Jacques Randrianasolo ont été présents, lors du rapport d’activités des PAC.(Photo Nary Ravonjy)
ISIRAELY 6 août 2019 at 10 h 24 min · Edit
tena marina ilay anao ry namana Manana, otran natao sammy hifanenjahantsika gasy!! fa rehefa vahiny no manao ny ataony eto amin’ny ty firenentsika ity dia tsy sahy hozongozonina!!
Manana 3 août 2019 at 12 h 38 min · Edit
Ohatran’ny samy Malagasy ihany no tena mifampihinan’ny ….eto
Fa mba ahoana ny momba ireo kàrana tena tompon’ny corruption hatrany amin’ny tsinay maintiny daholo ???
Ny volan’ny sinoa,karana,vazaha(gasy sandoka) any amin’ny PARADIS FISCAUX
Ny famotsiam-bolan’ny Italiana ao nosy be mikasika ny poudre sy ny affaire MAFIOSO ???
Raha ireo fotsiny no voaverina sy voavaha dia feno vola ny kitapom-bolam-panjakàna.
Ny firenena Frantsay dia tsy mamela ny mariage tsy NORME,ny an’ny gasy kosa tsy mba misy fanadihadiana
akory ireo lahy antitra vazaha sy ireo mpanao bizina mitady nationalité gasy manambady vehivavy kely sy mbola vatony toy ireny zafikeliny ireny ireo malagasy ho vadiny.